Waxyaabaha SEO ee badanaa lagu caddeeyaa mashiinka raadinta ee dhabarka?
Maalmahan, shirkadda raadinta adduunka ayaa loo yaqaanaa inay ku shaqeyso darajo heer sare ah, taas oo ku tiirsan laba boqol oo kala duwan. Qaar ka mid ah kuwa kale, mashiinka raadinta Google wuxuu qiimeeyaa dhabarka bogga internetka oo dhan isagoo isticmaalaya qiyaaso daraasad oo kala duwan oo ah wax ku ool ah SEO. Ka hor intaanan ku tusin waxa dhab ahaan lagu xisaabtamo Google si ay u fahmaan "qiimaha dhabta ah ee gadaal kasta oo ku yaala Webka, waxaan ku bilaabi karaa waxyaabo kale oo aasaasi ah.
Maxaa keena Backlink?
Marka hore iyo ugu horreyn, waa maxay dhabarka qeexida? Sida Google lafteeda, mashiinno kasta oo weyn oo raadiyeyaashu waxay ku tilmaamaan dib u eegis sida xidhiidhada soo galaya ama soo galaya ee ka yimaada khayraadka internetka ee saddexaad, dib ugu noqo boggaaga gaarka ah. Oo aynu wajahno - horaantii sanadkan waxaa jiray fariin rasmiya oo rasmi ah oo ay soo saareen saraakiisha Google ee ku saabsan astaanta xiriirka ee ka mid ah qodobada saddexaad ee koowaad. Taasina waa sababta ay Google search engine u siinayaa dib backplks muhiim u ah hadda. Si ay u fududeeyaan, waxay yihiin "codadka" kalsoonida, taas oo ansixinaysa bogag kasta oo ku kalsoon dadka isticmaala waxayna xaqiijiyaan tayada bogga oo dhan.
shabakadaha kale ee qoraalka ah ama blogyada, iyo makiinadaha waaweyn ee raadinta kadib. Si kastaba ha ahaatee, ogow, ilo kasta oo online ah oo leh hay'ad sare maahan macnaheedu in ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagu soo booqday ee iibka caalamiga ah. Ka dib oo dhan, haddii mid ka mid ah uu ku socdo blog ama shabakad leh waxyaabo gaar ah, qiimo leh, iyo waxyaabo macquul ah - ilaha noocan oo kale ah ayaa sidoo kale laga yaabaa in si weyn loo tixgeliyo, laga yaabo inay ka fiican tahay inta badan. Habkaas, makiinad kasta oo raadin kasta waxay caddaynaysaa dib u eegis si ay u go'aamiso haddii websaydhka ama blogku uu qiimahoodu muujinayo natiijooyinka ugu sarreeya ee SERPs.
Google Search Engine Waxay Cadeeysaa Backlinks by:
tirsi tixraac shakhsiyeed oo ku xiran bog kasta oo ka mid ah boggaga ama blog;
isku xidhnaan kala duwanaansho (i. e. , oo ah noocyo kala duwan, oo leh PageRank sinnaan la'aan ah, oo ka imanaya meelo badan oo kala duwan oo Webka ah sida ugu macquulsan);
pagerank (PR), maamulka domain (DA), iyo bogga maamulka (PA) ee ilo kasta oo internetka ku xiran bogagga shabakadaada (i. e. , way ka sii fiicnaan lahayd in dib loo soo celiyo xoogaa awood leh oo leh awood sare iyo kalsooni, halkii ay ka ahayd xidhmo weyn oo kuwa tayada hooseeya);
backlinks oo ka soo jeeda agagaarka da'da ah ayaa badanaa lagu arkaa mid ka qiimo badan kuwa ka dhashay ilamaha dhaladka ee soo maray nolol dhowaan dhow;
website-yada ama blog-yada la xidhiidha dib-u-celin caadi ah oo qiimo weyn leh ayaa la siin doonaa haddii la barbar dhigo ku dhawaad ​​ciriiri iyo cidhib-tiryo ka yimaada ilaha irrelevnt;
codsanaya SEO-ga Black-yada (tusaale ahaan, beeraha isku xira, isku-xirka spam, bogagga albaabka, girjirka isku xirka, koodhka qarsoon, iwm. ) waxay heleen awood xad dhaaf ah si ay u keenaan saameyn xun oo xun oo ku saabsan qiimeynta boggaga hadda;
xidhiidhada xuduudaha (i. e. , backlinks laga helo qoraalka ugu muhiimsan ee bogga bogga) ayaa aad uga awood badan, halkii aad ka heli laheyd meelo kale oo dhan bogga (haddii kale, hoose) oo kuxiran qaybo kala duwan, plugins, ama qaybaha kale ee bogga Source .